Akka waan Oromoof loltanii | Oromia Shall be Free
Akka waan Oromoof loltanii
bilisummaa April 12, 2014	Comments Off on Akka waan Oromoof loltanii
Jeneraala isiniin jennee
Diina Oromiyaa irraa kaaftanii
Nu isinii hin-kenninee
Dhaaduu teessan hoongoftuu
Kunoo itti saalfanne!
Iyyinee iyya labsinee
Dhiya’rraa haga Bariitti
Kaaba’rraa haga Kibbaatti
Akka Loon boojjii fedhuu
Daanee isin jala yaanee
Lolee lolchiisaa, farra diinaa
Arganne jennee qoma dhiibnee
Adaa wonti kijibaa
Yaboo isinitti kenninee
Akka waatii lowwanii
Dirree keessa gulufnee
Gibaata bantan seenee
Yaboo goototaa nyaattanii
Lafee goototaa gantan!
Sanyii Oromo’o gabaabsitanii
Falmataa fi Falmattuu
Cabbiin mataa haaddanii
Akka korbeessa re’ee
Cidhaa isaa tumtanii
Kosii isaa gubdanii
Biyya isaa irratti
Haga funyaanii hidhattanii
Mee malumaan gootan?
Abbaa worraa hidhuudhan
Yoo feetan ajjeesuudhan
Bakka jirtanii nutti yaatanii
Kuta’aan nu qoddanii
Kunillee isin hanqanaan
WBO abdii keenna
Midhaanii bishaan dhoggatanii
Diinatti nurraa galchitan!
Ergaa deemtu mo’o baqa dhuftan?
Sabaaf dhukkufataa fakkatanii
imimmaan Nachaa boottanii
Hamileen Oromo’oo cabde seetanii
Gaafa dhaamsa goototaa
Adaa kolfaa turtanii?
Ayyaanni Oromoo guddaan
Rabbi dhugaa h’dagatuu
Ammaa isin balleessaa
Waandhi Gurraachii keenna
Dhugaa malee maal tissaa!
Aduun dhiitee hinhaftuu
Furtuun rakkoo Oromoo
Ginbot 7nii miti
Saba dhamaasuu yaaltu
Uduu isin gaafattee
“ilmaan tiyya isin seehee
Haati tessan bargaafattee
Bakka isiin hinmalle dhaxxee
Diina irraa isin fiddee?
Garuu ana hinfakkatanii
Ana taatu wakkatanii
Himaa bakka’rraa dhalatani!
Adaa narraa hin dhalannee
Gudeeda kiyya’rraa hinbaane”
Hobbaatii taatee h’haftuu
Qumaantaa ka dhalattu
Kan maqaa kiyyaa nyaattu
Kan mata-gala galtu
Kan biyyaa-biyyee gantu
Akka waan goota taatee
Maqaa kiyyaan awwaattu”
Dubartiif sardoo qabnee
Asiif achi utaltee
Bakka hintaane aseentee
Diina’rra si funaannatee?
Sanyii Oromoo si seetee
Haati tee ta si dheette
Dhaamsa sitti dhaammate
[ ilma kiyya jabaadhu
Zinnaaraan mudhii hidhu
Saba keetiif falmadhu
Ruufa “UN” kessatti fannisii
Mataa ol nu qabachiisii
Motummoota “UN” kessatti
Barcumaa nu raggaasisi!
[ Abbaa kee h’salphisin
Innuu duruu na shakka
Fuulaan isa hin fakkattu
Qumaantaa kankee argaa
Maqaa kiyya na nyaatin
Bakka sifidee h’himin
Diina woliin hin oolin
Diinaaf golgaa hin ta’in
Akkas siin jette haatee
Haadha dhaltee, si woliin rakkatte
Akka si gootu dhabde
isiin nama si seete
Goota itti fakkatte
Dhalee sii gudunfite
Duulaaf si bobbafatte
Biyyeen ana ha nyaattuu
Dhaamsa jannaa sii dhaamte
Oromummaa sii laatte
Ati uf irratti wollaalte”
Previous Bilisummaa oromootiif
Next Qabsoon Oromoo kan milkaa’u,“Qabsaa’onni” gaafa Qabsoo Siyaasaa Eegalaniidha.